Niova ny pikantsary Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Azo antoka fa voamarikao fa rehefa miditra amin'ny App Store ianao, na amin'ny Mac, iPhone na iPad, eo akaikin'ny pikantsary an'ny rindranasa ho an'ny fitaovana lehibe dia misy pikantsary kely vitsivitsy momba ny fahitana an'io fampiharana io amin'ny Apple Watch. Pikantsary mahitsizoro tanteraka izy ireo amin'ny zoro mahitsy izay tsy mamarana ny famenoana an'i Apple ary izany no antony tsy ho ela dia hanomboka hiseho amin'ny zoro boribory izy ireo manahaka ny endrik'ilay Apple watch.
Apple dia hanome endrika mahasarika kokoa amin'ny fampisehoana ireo pikantsary ireo ary hampihatra sisiny mainty ho hitantsika rehefa apetraka amin'ny famantaranandronay ilay rindranasa ary, etsy ankilany, zorony boribory mandinika ny rafitry ny fitaovana. Izany rehetra izany dia kendrena amin'ny fanaovana ny sary misimisy kokoa sy manintona kokoa.
Apple, rehefa mandeha ny fotoana, dia mahatsapa tsipiriany kely mifandraika amin'ny vaovaon'ny Apple Watch. Amin'ity tranga ity dia tsikaritr'izy ireo fa ny pikantsary an'ny fampiharana ho an'ny Apple Watch izay miseho ao amin'ny App Store amin'ny endriny samihafa mitovy amin'ilay fitaovana dia tsy manintona velively ary hanova ny endriny mahitsizoro manampy sisintany mainty misy zorony boribory izay manahaka ny efijery Apple Watch.
Amin'izao fotoana izao dia nisy ny fiovana, saingy fotoana fohy ny fanovana tsikelikely ny fisehoan'ireo sary ireo ao amin'ny App Store an'ny iPhone, iPad ary iTunes. Araka ny efa nahatsikaritrao, mainty ny ao ambadiky ny interface Apple Watch ary mainty ny ankamaroan'ny fampiharana. Misy antony daholo izany ary izany no izy Ny mainty dia naseho fa ilay mampiasa angovo faran'izay kely amin'ny famataranandro ary mamonjy ny ain'ny bateria.
Ny zava-misy fa ny interface ny famantaranandro dia misy fiaviany mainty dia natao ihany koa ka ny sisin-tany mainty misy ny famantaranandro dia tsy dia tsikaritra loatra ary rehefa manana ny famantaranandro eo am-tànanao ianao dia tsy dia voamarika loatra fa efijery dia tena mahitsizoro amin'ny zorony mahitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Toy izao no nanovan'ny Apple ny pikantsary an'ireo fampiharana ho an'ny Apple Watch
Ahoana ny fanovana ny boaty an'ny Apple Watch ho boaty firavaka-charger